विदेशी रोजगार सम्बन्धी चेताउनी – Word of Truth, Nepal
७. तपाईं गलत मानिसहरूसित नजिक हुनुभयो भने तपाईंलाई हानि हुनेछ(हितोपदेश १३:२०; १ कोरिन्थी १५:३३)। विदेशमा काम गर्न जानेहरू प्राय:जसो सांसारिक वातवरणमा अविश्वासीहरूसँगै बस्नुपर्छ जो आत्मिक जीवनको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ। पत्रुसको जीवनमा हामी यो देख्छौं। येशू पक्राउ पर्नुभएपछि पत्रुस उभिएर ख्रीष्टका शत्रुहरूसँग आगो तापे (यूहन्ना १८:१८), त्यसपछि उनी तिनहरूसँगै बसे (लूका २२:५५)। धेरै समय नबित्दै उनी सराप्दै ख्रीष्टलाई इन्कार्दैथिए! यस संसारका अविश्वासीहरूको सङ्गतबाट पूर्ण रूपमा अलग बस्नु असम्भव कुरा हो साथै उचित पनि होइन, तर आफ्नो मन शुद्ध राख्न र परमेश्वरसँग हिँड्न सक्नलाई विश्वासीले जहिले पनि आफूले सक्ने कुरामा आफ्नो परिस्थिति र वातवरणको नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
८. यदि तपाईंले पैसा ऋणमा लिनुभयो भने तपाईं ऋण दिनेको दास बन्नुहुन्छ(हितोपदेश २२:७)। चोर्नु परमेश्वरको सामु अपराध हो (प्रस्थान २०:१५)। यदि विश्वासीले पैसा ऋणमा लिन्छ र फेरि तिर्ने प्रतिज्ञा गर्छ भने उसले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्छ, नत्र भने ऊ फटाहा र चोर हो। धर्मी जनले कसम खाएपछि आफ्नै हानि खाए तापनि कुरा बदली गर्दैन (भजन. १५:४)। धर्मी मानिस आफ्नो वचन पूरा गर्ने मान्छे हो। थुप्रै पैसा कमाएर सजिलै ऋण तिर्नेछु भनेर सोचेर कति मानिसहरूले विदेश जानलाई धेरै-धेरै पैसा सापट लिएका छन्। तर कतिपटक उनीहरूलाई भनिएको भन्दा कम ज्याला दिइन्छ र ऋण चुक्ता गर्न गाह्रो पर्छ। ऋण तिर्न मात्र वर्षौं काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मलेशियामा “कामदारहरूले जानलाई खर्च गरेको पैसा मात्र कमाउन लगभग एक वर्ष काम गर्नुपर्छ” (Kathmandu Post, Feb. 2, 2016)। उनीहरू ऋण दिनेको दास बन्छन्। वास्तविकता बुझेपछि उनीहरू त्यो करारबाट उम्कन पाउँदैनन्। एक जवान ख्रीष्टियान विदेश गए र थाहा पाए विदेश जानु परमेश्वरको इच्छा होइन रहेछ। उनी नेपाल फर्कन र बाइबल कलेज पढ्न चाहे तर सकेनन् कारण उनलाई धेरै पैसाको ऋण थियो। उनी अविश्वासी मानिसका दास बनेका थिए र परमेश्वरको इच्छा पछ्याउन स्वतन्त्र थिएनन्। तुलनामा उत्तम मार्ग त परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु हो र उहाँले जुटाउनुभएका कुरामा सन्तुष्ट रहनु हो (हिब्रू १३:५-६)। लोभ गर्नु चाहिँ आफुसँग भएको कुराहरूमा सन्तुष्ट नहुनु हो। अझ धेरै चाहनु र अझ धेरै पाउनलाई कडा परिश्रम गर्नु नै बेठीक होइन, तर तपाईंसँग वर्तमान समयमा जति छ त्यत्तिमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुपर्छ र लोभी हृदय हुनुहुँदैन।
१०. उहाँका जनहरू कडा परिश्रम गर्छन् र सन्तुष्ट रहन्छन् भने उनीहरूको खाँचोहरूको लागि उनीहरूसित पुग्दो हुनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ(हितोपदेश १०:४; १२:११; १३:२३; हिब्रू १३:५)। तपाईं विदेश जानु पर्दैन। कडा परिश्रम गर्न, इमानदार हुन, र आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा बुद्धिमानी हुन तपाईं तत्पर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईंलाई एउटा काम जुटाउनुहुनेछ जसले तपाईं र तपाईंको परिवारका खाँचोहरू पूरा गर्नेछ। एक बर्षीय चेलापन शीर्षक अन्तर्गत यस सम्बन्धी पाठहरू छन्।
NepalNews.com (डिसेम्बर २, २०१३) अनुसार २०१२ सालमा मात्र विदेशमा काम गरिरहेका ८३४ नेपालीहरूले आफ्‍नो ज्यान गुमाए। गल्फ राष्ट्रहरू र मलेशियामा मात्र यति सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू मरे। अनि यो नियमित यस्तै भइरहेको देखिन्छ किनकि २०१० मा पनि यिनै राष्ट्रहरूमा ८२६ ले ज्यान गुमाएका थिए। समाचारअनुसार धेरैजसो निन्द्रामै मरेका भेटिए। अरू कारणहरू हुन् – सडक दुर्घटना र आत्माहत्या। गल्फ राष्ट्रहरूको झुराउने तापक्रम पनि एउटा कारक हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
The Guardian को एउटा समाचार अनुसार काठमाण्डौं विमानस्थलमा औसत ३-४ ओटा शव प्रत्येक दिन आउने गर्छन् (“At 16, Ganesh GotaJob in Qatar,” Sept. 25, 2013)। समाचारमा “कलङ्कात्मक दुरुपयोग र शोषण” को चर्चा गरिएको छ। समाचारमा उल्लेख छ, “कबुल गरिएको तलब र प्रत्याशाको साटोमा धेरै कामदारहरूलाई शोषण, भ्रष्टाचार, छल र झनै बढ्दो रूपमा दासत्व र मृत्युको जालमा फसाइन्छ।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-23 11:10:552020-04-28 14:04:37विदेशी रोजगार सम्बन्धी चेताउनी
सबै कुराहरूमा तिनीहरूले परमेश्वर...